"Kulligood ba kufsada oo cashar u dhiga" - Fadeexad Cusub - Jigjiga Online
HomeWararka Caalamka“Kulligood ba kufsada oo cashar u dhiga” – Fadeexad Cusub
“Inta guriga degan oo dhan kufsada oo cashar u dhiga,” ayey fariimaha midkood ahayd.
“Alla Ilaahayoow. Hadaan siil leeyahay aniguba ma jeclaadeen inaan halkaa joogo” ayay mid kale ahayd.
Todobaadadii ka dambeeyey markii Anna ay aragtay fariimahaa, warku wuxu wada gaadhay Jaamacadda. Wax ku bilowday sheeko “u gaara wiilal” ayaa degdeg faraha uga baxay.
Laakiin markii laba nimankaa ka mid ah mamnuucidii 10 sano ahayd laga yareeyey oo laga dhigay 12 bilood, ayaa waxa su’aalo adag la iska weydiiyey sida jaamacaddu baadhigaanka u samaysay.
‘Fariimo wiilal u gaara’
“Wuxu yidhi hadaad fariimahan wax xun moodayso, bal maad aragtid kuwa kooxdayada wiilasha u gaarka ah” ayay tidhi Anna. “Waana markaa marka uu i tusay fariimo sannad iyo badh la isku dirayey oo hanjabaad kufsi ah”
“Waxay ka hadlayeen ardayad saaxiibadood ah. waxay ka hadlayeen sida loo afduubay, sariirta loogu xidhxidhay, ee lagu qasbay inay isku kaadido ka dibna kaadidii dhex seexato”‘
“May ahayn hadal iska sahal ah” ayay tidhi Anna “waxay ahayd ummad dhan oo internet-ka ku wada xidhiidhaysa, waanay ku faraxsanaayeen waxaa xun”
Markii hore Anna waxay tidhi saaxiibkeed waxba kamuu soo qaadin fariimhaa oo wuxu ku sheegay “waa sida wiilashu u hadlaan” kaftanna wuu ku sheegay.
“Waxan u sheegay inaan hubsanayo”ayay tidhi Anna. “Wuu arkayey inaan kolba sii cadhoonayey. Waxaanan u malaynayaa waa markaa marka uu arkay in arintu siduu moodayey ka culustahay”
“Wax aan sameeyo maan garanayn waayo dadkan fariimaha is weydaarsanayaa waxay ahaayeen dad noloshayda qayb weyn ka ah” ayay tidhi.
“Waxaan u diyaar garoobayey inaan ku noqdo jaamacadda laakiin albaabka guriga waan ka bixi kari waayey” ayay tidhi
Markaa ka dib ayay go’aansatay in ay u cabato jaamacadda.
Nigel Farage Oo Garab Istaagay Somaliland